Unsuccessful Love | NAJ Entertainment
Home Story Unsuccessful Love
This isamotivational story for every youths. Nowadays the rate of youngsters committing $uicide is increasing day by day. This story tends to giveapositivity on how to feel the precious life. $uicide isadisgraceful act, sayabig NO to $uicide.
कथा :- असफल प्रेम अनि आत्महत्या
मलाइ होस् आयो। मैले आँखा खोलेर हेर्दा म चकित भएँ। यस्तो कसरी हुन सक्छ ? म कसरी जिवित छु अझै? म गलबन्दिमा तुर्लुङ्ग झुन्डिएको छु तर पनि म कसरी अझै मरेको छैन? अहं यस्तो हुनै सक्दैन। घाँटिमा पासो लगाएर झुन्डिएको मान्छे कसरी जिवित हुन सक्छ ? म संग प्रश्न नै प्रश्न थिए तर जवाफ एउटै थिएन। कदापी हुनै नसक्ने कुरा भएको थियो। मैले घाँटिमा कसिएको गलबन्दी फुकाएँ अनि पलङमा गएर बसेँ। म यो आश्चर्य हुनुको जवाफ खोज्दै थिएँ। त्यति नै खेर मेरा नजर पंखा भए तिर पुगे। म झनै चकित भएँ। अर्को ठूलो झट्का लाग्यो मलाइ। चक्कर आउला झैँ भएर आयो। पंखामा गलबन्दी झुन्डिएको थियो अनि गलबन्दिमा म पनि तुर्लुङ्ग झुन्डी राखेको थिएँ। म आत्तिदैँ पलङबाट उठेँ अनि झुन्डिएको मेरो आफ्नै शरिरलाइ समाउन खोजे। तर अहँ मैले आफ्नो शरिरलाइ छुन पनि सकिन। मेरा हातहरु मात्र हावामा सलबलाए। यो के हुंदैछ ? म आफ्नो शरीर झुन्डिएको देख्दैछु तर म त्यसलाइ छुन पनि सक्दिन। कस्तो अचम्म? म हार खाएर फेरि पलङमा बसें अनि सोच्न थाले। सुनेको थिएं, आत्मा र शरीर अलग कुरा हुन्। भौतिक शरीर मर्दैमा आत्मा मर्दैन र मृत शरीर संग आत्माको मिलन हुन पनि सक्दैन।अब भने मैले केही बुझें झैं लाग्यो। जिवित मात्र मेरो आत्मा थियो। मेरो शरीर त मरि सकेको थियो। म आत्मा मात्र थिएँ। सोच्दा सोच्दै बाहिर बाट आवाज आयो। “बाबू….ए बाबू… यति बेला सम्म किन उठ्दैनस् आज ?” आवाज आमाको थियो।
बाहिर बाट छिमेकी हरु “हैन के भयो” भन्दै कोठामा पस्न थाले। सबै चकित भए। आमा बुबा संगै धेरै जनाको रुवाइ अनि चिच्याहटले कोठा शोकाकुल भयो। म भुइंमा ढलेकी आमा भए ठाउँमा गएर उठाउन खोजेँ, तर अहँ मैले आमालाइ छुन सकिन। मैले कराएँ “आमा……।” मेरो आवाज कसैले सुनेन। मैले बुझेँ अब म बोल्नु ब्यर्थ छ। मलाइ कसैले देख्न अनि सुन्न सक्दैन। म त मरिसकेको छु। म हार खाएर फेरि पलङमा नै थ्याच्च बसेँ। आमाको फेरि आवाज आयो “ए मेरा छोरा….. किन यस्तो गरिस् बाबू ? हामिले माया गरेनौं तंलाइ ?…… मलाइ पहिले मारेको भए हुन्थ्यो नि बाबू।” चिच्याउदा चिच्याउदै आमाको आवाज सुकेर फेरि लड्नु भयो। छिमेकी काकिले छेउको जगको पानी टाउकोमा छेप्दै आमालाइ काखमा राख्नु भयो। बुबा पनि रुंदा रुंदै लड्न खोज्नु भयो। छिमेकिहरुले बुबालाइ सम्हाल्दै पलङमा बसाए। बुबाले रुंदै भन्नू भयो “के दशा लाग्यो यो….. छोरो ज्ञानि छ जस्तो लाग्थ्यो….. कति सपना देखेकों थिएँ।” बुबा भक्कानो छोडेर रुन थाल्नु भयो।
मैले सुन्न सकिन। म बाटो छेउ तिर पुगेँ। त्यहाँ मेरा साथिहरु भेला भएर बसेका थिए। कोहि रुंदै थिए त कोहि बिस्तारै बोल्दै थिए। म नजिक गएँ। साथी रामेले बोल्यो “किन यस्तो गरेको होला यार त्यसले?” बिक्किले आँसु पुछ्दै भन्यो “अस्ति देखि तनाबमा थियो तर यस्तो गर्छ भनेर त सोचेको पनि थिएन यार।” सबिनले लामो सास फेरेर बिस्तारै बोल्यो “कस्तो केटिको लागि ज्यान दियो यार…. जसका लागि ज्यान दियो त्यस्लाइ त अलिकती पनि फरक परेको छैन।”
मलाइ रिंगटा लाग्ला जस्तो भयो। मेरो सास रोकिन खोज्यो। मैले जस्को प्रेममा मृत्यु रोजेको थिएं उस्लाइ मेरो मृत्यु खबरले कति पनि फरक परेनछ। मलाइ मैले मृत्यु रोजेकोमा पछुतो लागेर आयो। प्रेममा पागल भएर मैले मेरा बुबाआमालाइ नै बिर्सिएर यस्तो गलत कदम उठाएको थिएँ, तीनै बुबाआमाको भने सारा खुशी छिनिएको थियो। मैले केही महिनाको प्रेमको लागि बर्षौ सम्मको प्रेमको हत्या गरेको थिएं। जसले मलाइ प्रेमको बदलामा प्रेम दिएन उस्को लागि मैले आफुलाइ भन्दा बढी प्रेम गर्ने अनि मलाइ संशार ठान्ने मेरा बुबाआमाको प्रेमलाइ लात हानेको थिए।
पासो म लागेको थिएँ तर मरेको मेरो सारा परिवार थियो। म रुँदै कोठा भित्र पसेँ। मेरा बाआमा अनि आफन्तहरु डाको छोडेर रोइ राखेका थिए। रुंदा रुंदै आमाको आवाज बिलिन हुन लागेको थियो। बुबाको पनि श्वर सुकि सकेको थियो। बुबाआमा दुबैजना अर्धचेत अवस्थमा हुनुहुन्थ्यो। मलाइ असहैय्य भएर आयो। मलाइ आमालाइ बोलाउन मन लाग्यो। मैले कराएं “ए आमा… सुन्नुन…..।”
मैले केही जवाफ दिइन। आमाको काखमा टाउको राखेर सुतिदिएं। केहिबेर पछि आमाले मेरो केस सुम्सुम्याउदै भन्नू भयो “कहिलेकाहीँ खराब सपना देखिन्छ…. अर्कै तिर सम्झेर सुत अब।” यति भनेर आमा आफ्नो कोठा तिर जानू भयो। मेरो धड्कन लगभग शान्त भइ सकेको थियो। मैले मेरो सिरानिमा राखेको मोबाइल निकाले। ग्यालरी खोलेँ। मोबाइलको ग्यालरी लगभग उसैका तस्बिरहरुले भरिएको थियो। मैले सबै तस्बिर एकै पटक डिलिट गरिदिएं। आमाबुबाको एउटा तस्बिर छानेर मोबाइको वालपेपर लगाएं। उस्लाइ गरेका सम्पुर्ण म्यासेज अनि उस्को नम्बर पनि डिलिट गरें। अनि मनमनै कसम खाएं “म कहिल्यै यस्तो खराब कदम चाल्ने छैन। मलाइ संसार ठान्ने मेरा बुबाआमालाइ कहिल्यै रुवाउने छैन। मेरा बाआमाले जति माया मलाइ कसैले प्रेम गरेको छैन र गर्ने पनि छैन। उहांहरुको प्रेमलाई बिर्सिएर म अरु कसैको प्रेममा आफुलाइ मार्ने छैन।”
Previous articleWhat Is Love? A Short Article By Nawaraj Bashyal
Next articleGet Rid Of Fat Stomach | Tips To Decrease Your Body Weight